आजीवन कुर्सी- सम्पादकलाई चिठी - कान्तिपुर समाचार
प्रधानमन्त्री हुने शैक्षिक योग्यता कति ? संसारमा कुनै मापदण्ड छैन  । चरित्रवान, इमानदार, जनताप्रति उत्तरदायी, उदार तथा सहिष्णुता नै प्रधानमन्त्रीमा हुनुपर्ने योग्यता हो भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ  ।
सभ्य र विकसित देशमा आफ्नो मिसन कार्यान्वयन नहुने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिने चलन छ । बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको धेरै भएको छैन । हामीकहाँ भने प्रधानमन्त्रीहरूले नैतिकता दर्शाएको पाइँदैन । पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म पदमा टाँसिइरहने लालसा प्रधानमन्त्रीहरूमा देखिएको छ । प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा आसीन व्यक्तिले के बोल्ने, के नबोल्ने थाहा नहुनु दुःखको विषय हो ।
–ज्यो. रत्ननिधि रेग्मी 'शुक्राचार्य', काठमाडौँ
जबसम्म त्रिविलाई राजनीतिबाट मुक्त गरी नैतिक रूपमा स्वच्छ राख्न सकिँदैन, तबसम्म आम जनमानसमा त्रिविप्रतिको विश्वास घट्नेछ  । यसबारे समयमै सोच्नुहुन सम्बन्धित पक्षसँग अपिल गर्छु  ।
त्रिवि सेवा आयोगका पदाधिकारीहरूले आफ्ना आफन्त र निकटकालाई जागिर खुवाउन योग्य उम्मेदवारको अङ्क घटाएर अयोग्यको बढाउने जुन कार्य गरे, खेदपूर्ण छ । जेहेनदार र मिहेनती विद्यार्थीलाई दीक्षित गरिने ‘गोल्ड मेडल’ पनि केही रकममा बिक्री हुन थालेछ । बेलाबखत समाचारमा आइरहने दुर्व्यहारका घटनाले पनि प्राध्यापकहरूको नैतिक आचरण कमजोर भएको संकेत गरेको छ । आंगिक क्याम्पसहरू पनि पानीमुनिको ओबानो छैनन् ।
– आदर्श वाग्ले, त्रिचन्द्र कलेज, काठमाडौं
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि महत्त्वपूर्ण पदमा राजनीतिक भागबन्डा सुरु भएको हो । योग्यलाई कुल्चेर आफ्नो गुलामी गर्ने र पैसा खुवाउनेलाई नियुक्त गर्ने निकृष्ठ खेल सुरु भएपछि त्रिवि राजनीतिक हुंकार मच्चाउनेहरूको खेलमैदान बन्न पुग्यो । अहिले त्रिविमा शकुनीको जुवाझैं तुरूप हान्ने शिक्षितहरूको विगविगी छ । त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्ष, सदस्य, प्रशासन प्रमुख, प्राध्यापकजस्ता मूर्धन्य व्यक्तिहरूले नै विद्यार्थीको प्राप्तांक जोड–घटाउ गर्न थालेपछि कसको विश्वास गर्ने ? यो काण्डपछि मुलुकभरका जेहेनदार र मिहेनती विद्यार्थी झस्कन थालेका छन् । विश्वविद्यालय पैसाको भरमा प्रमाणपत्र दिने कारखाना भएपछि मिहेनत गरेर किन पढ्ने ?
त्रिविका इन्जिनियरिङ, चिकित्साशास्त्र, कृषि तथा पशुविज्ञान अध्ययन संस्थानबाट उत्पादित जनशक्ति एसियाकै उच्च श्रेणीमा मापन गरिन्छ । विश्वविद्यालयबाट उत्पादित दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुनु चिन्ताको विषय हो । विश्वविद्यालयहरू सेवा, अनुसन्धान र शैक्षिक गुणस्तरीय तथा उत्पादनशील शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकसित हुनुपर्छ ।
विश्वविद्यालयको साख उच्च बनाउन पदाधिकारीहरूको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने ‘सर्च कमिटि’ ले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी उपयुक्त व्यक्तिहरूको खोजी गर्ने बेला आएको छ । पदाधिकारी हुन इच्छुकहरूका योग्यता, कार्यक्षमता र अनुभवका साथै उनीहरूले प्रस्तुत गर्ने कार्ययोजनालाई आधार मानी नियुक्ति गर्ने परिपाटी बसाल्न सक्यौं भने विकृति तथा विसंगति कम हुँदै जानेछन् ।
– जीवनप्रकाश शर्मा, सहप्राध्यापक, त्रिवि, कीर्तिपुर